BMW-318 akusho hit ukubukeka kwabo, ngoba nje umklamo walo Kuyaziwa bonke kusukela ngo-1998. Le moto odinga isimo sengqondo ekhethekile. Ukuze siqonde ukuthi umklamo walo mshini, kudingeka sihlolisise.
"Troika" komculo zonke izici Umklamo BMW izimoto. Umshini ubukeka ivumelane kakhulu, ukukhumbula ukuthi lokhu imodeli - ekudalweni sezingcweti Bavarian. Hood ngokushelela zibe "impumulo" ebhekene the Izinsimbi. Izibani abe pair of namantombazane kusukela phansi kuya ukuma isigamu-yayinamakhothamo. Izibani ezingemuva futhi kuphumele uJehova incwadi, futhi ohlangothini ezingemuva umnyango elicwebezelayo umugqa senziwa ngendlela arc ngomusa, isici kuphela lokhu brand. Nakuba BMW-318 futhi wawungaphansi ulaka of esasisandulele, kodwa sesiye nenhle ngaphezulu. It akuseyona liphinyiselwe ezemidlalo imoto, futhi okuqinile imoto ibhizinisi ekilasini.
Ukuba nengqondo lula lokhu model nomphumela. Umnyango izibambo imoto ukhululekile kakhulu futhi ezinkulu. Car isihlalo kalula adjustable. Bheka akukho iziyisikhombisa bevela kuzo zonke izinhlangothi, ngoba zonke zimunye one block ngaphandle esicamelweni kwesitulo. Awu ukucabanga-out ukulungiswa we nokuphakama nokujula lokutshala eziqondisa kanye ukulungiswa kagesi izibuko.
Abantu abane bangase ihlanganise lweBMW-318. Izibuyekezo abagibeli ku induduzo ikakhulukazi okuhle ngoba izimoto impela eningi isikhala nezihlalo ukhululekile. abagibeli engemuva ningathinti emadolweni emihlane izihlalo eziphambili, ngisho ngekukhula 180 cm, abakwazi bahluleke ukujabulisa.
Injini ugijima kakhulu ngokushelela, hhayi kuphela ngenxa kukhwalithi ephezulu Yakha, kodwa futhi ukusetshenziswa ngokulingene imiphini.
BMW-318 umsindo ngabodwa lengenamaphutsa. Onjiniyela wafaka eziningi umzamo ukuze ancamuka umsindo yangemuva, kusale kuphela umsindo ngokulambisa ezwakalayo of motor.
Ngo Dynamics imoto ezimbili babhekana. Ungakwazi ukugibela usuku lonke kwimodi umnotho, engazi amakhono wangempela umshini. Iphina le isinyathelo igesi nzima, ungakwazi ukufinyelela 4000 rev / imiz - imoto eyeka ukuba zihluke kakhulu. Kulokhu kudingeka ngokushesha ukuphatha isinyathelo bamba gearshift isigwedlo. Gearbox isebenza emihle, futhi ingalo ngaphansi ngakwesokunene ibekwe kahle. Uma kudingekile, wavele swings.
BMW izimoto zaziwa kubo bonke lobubhalo lakhe. Ngisho ngaphansi ukusheshisa kanzima "ezintathu" akusho baveze mfana yokungalaleli. ukuzilawula ngokuzenzekelayo sideslip futhi ASC T traction ukulawula kuqinisekisa ukuthi isondo imoto akuyona skidded noma baphazamiseka ibe skid. Kuze kube yimanje, uhlelo enquma ngokuzenzakalelayo uphethiloli supply futhi retarding amasondo ngabanye.
Onjiniyela wasebenza ngokuphelele BMW-318 amabhuleki. Konke "Trika" uhlelo ifakwe CBC. Lapho braking, cornering, ngaleyo ndlela silondoloze handling hlangothi. Ngamanye amazwi, ukhiye uvinjelwe namasondo ukubhidliza ngezimbazo ngabanye.
Ngaphandle zijike imoto esihle semigwaqo ebambe sibonga ezifanayo amandla ukusatshalaliswa eduze izimbazo (50:50) futhi ukumiswa ezimele wonke amasondo. Ngenxa ukusetshenziswa aluminium ku front futhi bakhulise isakhiwo ukumiswa ngokuphawulekayo encishisiwe isisindo.
"Three" standard 6-airbag afakwe. Emnyango umshini babe latches esikuvimbela umnyango etshekile at umthelela, kababekanga ke bagibele.
isitayela abahlukile futhi uhlamvu - lawa izici BMW-318. Intengo yalesi imoto emhlabeni izinkulungwane 23 zamaRandi. Umshini yakhelwe kulabo abafuna hhayi nje izindlela zokuhamba, nokuningi.